Kabaha Kabaha - Soo -saarayaasha Kabaha Shiinaha iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Markaad dukaamaysiga aadayso, miyaad ogaatay in kabo badan ay isticmaalayaan kabaha suunka si ay kabaha u noqdaan kuwo mood iyo soo jiidasho leh. Guud ahaan marka la hadlayo, kabaha kabaha ayaa leh dhererka caadiga ah. Dhererkeeduna sidoo kale waa la habeyn karaa. Midabo kala duwan, habab kala duwan iyo walxo kala duwan, cabbir ayaa loo adeegsadaa kabaha kabaha, taasoo ka dhigaysa mid aad u fiican. Iyada oo la kaashanayo kabaha kabaha, kabaha ayaa aad u sii fiicnaanaya. Midabadu waa midabyo adag., Midabyo isku dhafan oo isku dhafan, midabo qaansoroobaad, dhalaalaya midabada mugdiga ah iyo midabada tuman ee macdanta ah. Midabkee u dhigmi kara kabaha? Haddii kabaha ay yihiin bandhigyada isboortiga moodada ah, midabyo isku dhafan oo isku dhafan & midabada qaansoroobaad ayaa la isticmaali karaa. Haddii kabaha ay leeyihiin midabada caadiga ah, midabada adag ayaa la isticmaali karaa. Haddii kuwaan loo adeegsado socodsiinta habeenka, adeegsiga “dhalaalka midabka madow” waa fikrad wanaagsan.Soo celi astaanta, marmarka qaarkood astaanta ayaa lagu daabici lahaa kabaha laakiin marmarka qaarkood, astaanta waxaa lagu dari karaa kabaha kabaha. Calaamaddu waxay noqon kartaa daabacaadda silkscreen, daabacaadda dib -u -dhigga, daabacaadda sublimated, tolmo iyo iwm, oo ay ka mid yihiin astaanta tolmoon oo aad uga sareysa qiimaha. Iyada oo ah alaab-qeybiye muhiim u ah Ciyaaraha Olombikada iyo baarkinka Disney, doorashada annaga ayaa siin doonta dareenkaaga qoto dheer qiimaha, tayada, taariikhda gaarsiinta iyo adeegga iibka kadib. Isla markiiba nala soo xiriir!